Otu esi etinye & mepụta VM na VirtualBox na Pop!_OS 20.04 - LinuxCapable
Otu esi ebido & Jiri VirtualBox
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye VirtualBox na desktọpụ gị!_OS 20.04, yana imepụta igwe mebere ọhụrụ site na ọkọ.
Ugbu a, melite ndepụta nchekwa gị iji gosipụta mgbakwunye ọhụrụ.
Na nrụnye zuru oke, ị nwere ike ịmalite Virtualbox na Pop!_OS n'ụzọ ole na ole dị iche iche.
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ VirtualBox & nye iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọdụ ụgbọ ala:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Oracle VM Virtualbox. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Imepụta na hazie VM ọhụrụ na VirtualBox bụ usoro kwụ ọtọ dị ka ndị a. Nkuzi a ga-emepụta VM na profaịlụ Linux maka ịmepụta Ubuntu 21.04 Desktọpụ VM ọhụrụ.
Kwụpụ 1. Ozugbo VirtualBox mepere, pịa bọtịnụ Igodo ọhụrụ dị ka n'okpuru:
Kwụpụ 3. Window na-esonụ ị ga-ahụ bụ họrọ Ebe nchekwa (RAM) nhọrọ. Ihe ndabara bụ 1024 MB; Agbanyeghị, maka ọtụtụ sistemụ, ị ga-achọ ịbawanye nke a. Ndụmọdụ dị mma bụ ileba anya na nkọwapụta min wee chọpụta oke ebe nchekwa VM OS gị ga-achọ ma ọ bụ gbasaa ruo oke dị mma.
Nke a ga-amalite ịwụnye sistemụ arụmọrụ a họọrọ; nke a bụ Ubuntu 21.04 dị ka ọmụmaatụ maka nkuzi.
Categories Pop! _OS Tags POP! _OS 20.04 Mail igodo
Otu esi etinye PHP ImageMagick (IMAGICK) na Debian 11 Bullseye